शेष नाग देखने बित्तिकै फोटो छोई ऊँ लेखी शेयर गरौँ !! २४ घण्टा भित्र तपाईंले सोचेको काम बन्नेछ!! - nepal day
शेष नाग देखने बित्तिकै फोटो छोई ऊँ लेखी शेयर गरौँ !! २४ घण्टा भित्र तपाईंले सोचेको काम बन्नेछ!!
प्रकासन मिति : २७ बैशाख २०७९, मंगलवार ०५:३४
नाग सर्प प्राणीहरू जो नेदरवर्ल्ड (पटला) मा बस्छन् र कहिलेकाहीँ मानव रूप लिन सक्छन्।
यी अलौकिक प्राणीहरूलाई समर्पित अनुष्ठानहरू कम्तिमा दुई हजार वर्षदेखि दक्षिण एसियाभरि भइरहेको छ। तिनीहरूलाई मुख्य रूपमा तीन रूपहरूमा चित्रण गरिएको छ: टाउको र घाँटीमा सर्पहरू, साधारण सर्पहरू, वा हिन्दू धर्म, बौद्ध र जैन धर्ममा आधा-मानव आधा-सर्प प्राणीहरूको रूपमा पूर्ण मानव।
कहिलेकाहीँ अनन्तको रूपमा पनि चिनिन्छ, सबै सर्पहरूको जेठो भाइ र पहिलो सर्प राजा हो: एक भक्त र विष्णुको पर्वत, उसले सर्पहरूको मैत्री पक्षलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ, किनकि उनीहरूले मुसाबाट खाना बचाउँछन्।
विष्णु सधैं निरन्तर ध्यान (योगनिद्रा) मा रहन्छन् र अनन्तले उनको लागि ओछ्यान बनाउँछन्; त्यसैले यो आसनलाई अनन्त-सायन भनिन्छ
उज्यालो नेपाल चितवन,
जन्मपत्रमा बनेको शुभ र अशुभ योगले व्यक्तिको जीवनमा प्रभाव पार्छ । ज्योतिष शास्त्रका अनुसार जहाँ शुभ योगले भाग्य बदल्छ, त्यही अशुभ योगले जीवनमा समस्या भरिदिन्छ । यस्तै एउटा योग ‘विष योग’ हो ।
कुण्डलीमा विश योग कसरी बनाइन्छ
ज्योतिष शास्त्र अनुसार शनिदेवको प्रभावले कुंडलीमा विष योग बन्ने गर्दछ । ज्योतिष शास्त्रमा विष योगलाई खतरनाक र अत्यन्तै खराब योग मानिन्छ । जन्म तालिका हेरेर विष योग सजिलै पत्ता लगाउन सकिन्छ। साथै, जीवनमा सामना गर्नु पर्ने कठिनाइहरूको आधारमा, यो योग धेरै हदसम्म पत्ता लगाउन सकिन्छ।
जसरी विषले असर गर्छ, त्यसरी नै यो योगले असर गर्छ
विश योगका कारण मानिसको जीवनमा संकट उत्पन्न हुने जनविश्वास रहेको छ । जसरी विषले आफ्नो प्रभाव देखाउँछ, त्यसरी नै मानिसले जीवनमा कठिनाइको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। हरेक काममा बाधा आउने मानसिक तनावबाट मुक्त हुँदैन ।
मनमा नराम्रो विचार आउँछ । मनमा सबै त्याग गर्ने भावना हुन्छ । जागिर, करियर, व्यापार र स्वास्थ्यमा समस्या रहन्छ। स्थिति हासिल भएको छैन।मानिसको आत्मविश्वासमा कमी आउँछ । निराशा र निराशा कायम रहन्छ।
विश योग शनि र चन्द्रमाले बनाउँछ
ज्योतिष शास्त्रका अनुसार शनि र चन्द्रमाको मिलनबाट विष योग बन्ने गर्दछ भने ज्योतिष शास्त्रका अनुसार शनि र चन्द्रमाको संयोजनबाट विष योग बन्ने गर्दछ ।
कुण्डलीको कुनै पनि घरमा शनि र चन्द्रमाको संयोग हुँदा यो योग बन्ने गर्छ । यसका साथसाथै शनि र चन्द्रमाको संक्रमणले पनि विष उत्पन्न गर्छ। साथमा एउटा विशेष कुरामा ध्यान दिनु पर्छ कि जब शनि कमजोर हुन्छ र चन्द्रमा बलवान हुन्छ तब विष योगको प्रभाव कम हुन्छ ।
यसका साथै ग्रहहरूको डिग्री पनि मिल्नुपर्छ।यदि शनि र चन्द्रमा एकअर्काबाट १२ डिग्री टाढा छन् भने विष योग बन्दैन । यसबाहेक अन्य कुरामा पनि ध्यान दिइन्छ । भगवान शिव र शनिदेवको पूजा गर्नाले यो योगको प्रभाव कम हुन्छ ।